JIRAMA-Andekaleka : Milina efatra no hihodina ary hamokatra 120MW
vendredi, 29 avril 2022 12:04
Nanatanteraka fidinana ifotony tany amin’ny toby famokarana herinaratra azo avy amin’ny riandrano tany Andekaleka ny minisitry ny Angovo sy ny akoran’afo, Andry Ramaroson, sy ny Tale jeneraly mpisolo toerana an’ny orinasa Jirama, Rivo Radanielina, ary ny Tale misahana ny herinaratra eo anivon’ny Jirama, Désiré Marcel Randrianarisoa ny faran’ny herinandro lasa teo.
Ny fanaraha-maso ny fizotry ny asa taorian’ny fahamaizana niseho tao an-toerana ny 2 janoary 2022, izay nampitsahatra tanteraka ny famatsiana herinaratra tao amin’ity toby ity no anton’izao fidinana ifotony izao.
« Nanome antoka ny mpanjifa sy ny vahoaka Malagasy isika fa tsy maintsy tafarina io fahasimbana io… nanome toky isika fa isaky ny 6 herinandro dia tokony mamerina gropy iray, ary averiko ihany fa tsy nisy gropy nandeha na iray aza tamin’izany fotoana izany. Amintsika miteny izao, efa misy gropy iray tafaverina mamatsy herinaratra miainga avy aty Andekaleka », hoy ny fanazavan’ny Tale jeneralin’ny orinasa JIRAMA, Rivo Radanielina.
Ny Alakamisy 28 Aprily tamin’ny 1ora 20min maraina ihany koa dia niroso tamin’ny fanombohana ny andrana fampandehanana ilay milina faharoa G2 ny teknisiana ao Andekaleka, ka 7MW no tanjany tany am-piandohana.
Nampiakarina tsikelikely izany ka nahatratra ny tanjany faratampony 30MW io milina io tamin’ny 5 ora maraina. Mbola anatin’ny fanaraha-maso tanteraka io milina io anefa ny teknisiana mba hisorohana indray ny mety ho tsy fahatomombanany.
Herinaratra 56MW arak’izany no vokarin'ny toby famokarana herinaratra azo avy amin’ny riandrano ao Andekaleka. Ny 26MW avy amin’ilay milina G3, izay efa namokatra nanomboka ny volana febroary lasa teo, ary ny 30MW kosa avy amin’ny milina G2, izay mbola arahi-maso.
Rehefa tafapetraka ity milina faharoa ity dia hiroso amin’ny fampandehanana ny milina farany G1 ny teknisianina, ka raha ny fanazavan’ny Tale jeneralin’ny orinasa JIRAMA, dia any amin’ny tapaky ny volana May any ho any dia milina telo no hiodina ao Andekaleka.
Aorian’izay kosa dia hiroso amin’ny fametrahana ilay milina fahaefatra ireo teknisianina avy eo anivon’ny orinasa JIRAMA.
« Efa manodidina ny 70% ny fahavitan’ny asa amin’ny fametrahana io milina fahaefatra io amin’izao fotoana izao.
Rehefa tafapetraka ireo milina efatra ireo dia hahatratra 120MW ny famokarana angovo azo avaozina ato Andekaleka », hoy ny Tale jeneraly, Rivo Radanielina.
Raha ny fanazavan’ny Tale jeneraly lefitra misahana ny herinaratra, Marcel Désiré Randrianarisoa dia any ho any amin’ny faran’ny volana Jolay 2022 no ho vita tanteraka, ary hihodina avokoa ireto milina efatra ireto.